132s किन यी चार रिपब्लिकनले सिनेटको कोरोनाभाइरस उत्तेजक विधेयकको विरोध गर्छन् images and subtitles
- हाम्रो राष्ट्र काम को मर्यादा मा निर्मित छ। यस बिलले के गर्छ, यसलाई फिक्स नगरी, के यो केवल तपाईले अधिक पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मात्र हो बेरोजगारी मा रहेको द्वारा भन्दा जब तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विकृत छ कि एक प्रोत्साहन हो। हामीले मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्न सक्दैनौं काम गर्न र अधिक पैसा कमाउनको लागि होईन काममा फिर्ता जानुहोस् र तपाईंको सामान्य तलब प्राप्त गर्नु भन्दा। - यो बिल अन्तर्गत, $ 600 भुक्तानी राज्य लाभ को शीर्ष मा वास्तवमा व्यक्तिलाई उनीहरूको आम्दनी लगभग दोब्बर हुने अनुमति दिन्छ केही परिस्थितिहरूमा। र म मानिसहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि, यदि तपाईंले आफ्नो जागिर गुमाउनु भयो भने, कि हामी तपाईंको ज्याला कवर। तर यो बिल अन्तर्गत, तपाईं एक घण्टा .1 23.15 प्राप्त, -० घण्टा काम हप्तामा आधारित, काम गर्दैन। -यसको बारेमा बहस हो कि हुँदैन हामी खराब ड्राफ्ट गरिएको बिल दिन गइरहेका छौं आउँदै गरेको महिनाहरूमा अझ कडा हुँदै यस राष्ट्रलाई ढकढकाउनुहोस् अन्जानमा बेरोजगारी बढाउँदै। यस बहसको बारेमा यही हो। त्यसोभए हामी केहि साँच्चिकै साधारण गर्न चाहन्छौं। हामी यहाँ के टुटिएको छ तय गर्न चाहन्छौं बेरोजगारी बीमा फाइदाहरू छन् भनेर १००% मा क्याप गर्नु पर्छ तपाईं बेरोजगार हुनु अघि तपाईंले दिनु भएको तलबको यो केवल बेरोजगार भएकाहरूको बारेमा मात्र होईन। यो बेरोजगार बन्न जाँदैछन् जो मान्छे को बारे मा छ आगामी हप्ताहरूमा। यो सबै संशोधनले भन्छ कि हामी केही मिनेटमा मतदान गर्दैछौं के हामीले बेरोजगारी फाइदाहरू टिप्नु पर्छ? काम गरेको बेला तपाईले भर्खरै पाउनु भएको मजदूरीको १००% मा। यो बिल अन्तर्गत, अब लेखिएको छ रूपमा, सरकारले धेरै अमेरिकीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछ सरकारी सहायता मा हुन उनीहरूले बनाउने भन्दा तिनीहरू आफ्नो नियमित काम मा काम गर्दै थिए। म बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम विस्तार समर्थन गर्दछ। यो पैसा प्राप्त गर्ने उत्तम र द्रुत तरीका हो व्यक्तिलाई जसलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ। तर हामीले प्रणाली निर्माण गर्नु हुँदैन जहाँ बेरोजगारी बीमा लाभ एक तलब भन्दा बढी हो। हामी मानिसहरूलाई काम भन्दा काम दिनको लागि अधिक तिर्न सक्दैनौं। यो आधारभूत सामान्य ज्ञान हो।
किन यी चार रिपब्लिकनले सिनेटको कोरोनाभाइरस उत्तेजक विधेयकको विरोध गर्छन्
< start="0.1" dur="5.1"> - हाम्रो राष्ट्र काम को मर्यादा मा निर्मित छ। >
< start="5.2" dur="3.768"> यस बिलले के गर्छ, यसलाई फिक्स नगरी, >
< start="8.968" dur="4.366"> के यो केवल तपाईले अधिक पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मात्र हो >
< start="13.334" dur="2.534"> बेरोजगारी मा रहेको द्वारा >
< start="15.868" dur="3.033"> भन्दा जब तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="18.901" dur="4.433"> त्यो विकृत छ कि एक प्रोत्साहन हो। >
< start="23.334" dur="5.367"> हामीले मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्न सक्दैनौं >
< start="28.701" dur="3.432"> काम गर्न र अधिक पैसा कमाउनको लागि होईन >
< start="32.133" dur="5.167"> काममा फिर्ता जानुहोस् र तपाईंको सामान्य तलब प्राप्त गर्नु भन्दा। >
< start="37.3" dur="2.534"> - यो बिल अन्तर्गत, $ 600 भुक्तानी >
< start="39.834" dur="2.1"> राज्य लाभ को शीर्ष मा >
< start="41.934" dur="3.4"> वास्तवमा व्यक्तिलाई उनीहरूको आम्दनी लगभग दोब्बर हुने अनुमति दिन्छ >
< start="45.334" dur="1.733"> केही परिस्थितिहरूमा। >
< start="47.067" dur="1.2"> र म मानिसहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। >
< start="48.267" dur="2.866"> म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि, यदि तपाईंले आफ्नो जागिर गुमाउनु भयो भने, >
< start="51.133" dur="2.334"> कि हामी तपाईंको ज्याला कवर। >
< start="53.467" dur="4.9"> तर यो बिल अन्तर्गत, तपाईं एक घण्टा .1 23.15 प्राप्त, >
< start="58.367" dur="3.2"> -० घण्टा काम हप्तामा आधारित, काम गर्दैन। >
< start="61.567" dur="2"> -यसको बारेमा बहस हो कि हुँदैन >
< start="63.567" dur="2.633"> हामी खराब ड्राफ्ट गरिएको बिल दिन गइरहेका छौं >
< start="66.2" dur="3.467"> आउँदै गरेको महिनाहरूमा अझ कडा हुँदै यस राष्ट्रलाई ढकढकाउनुहोस् >
< start="69.667" dur="3.8"> अन्जानमा बेरोजगारी बढाउँदै। >
< start="73.467" dur="1.7"> यस बहसको बारेमा यही हो। >
< start="75.167" dur="1.866"> त्यसोभए हामी केहि साँच्चिकै साधारण गर्न चाहन्छौं। >
< start="77.033" dur="2"> हामी यहाँ के टुटिएको छ तय गर्न चाहन्छौं >
< start="79.033" dur="2.634"> बेरोजगारी बीमा फाइदाहरू छन् भनेर >
< start="81.667" dur="2.4"> १००% मा क्याप गर्नु पर्छ >
< start="84.067" dur="2.5"> तपाईं बेरोजगार हुनु अघि तपाईंले दिनु भएको तलबको >
< start="86.567" dur="3.267"> यो केवल बेरोजगार भएकाहरूको बारेमा मात्र होईन। >
< start="89.834" dur="2.6"> यो बेरोजगार बन्न जाँदैछन् जो मान्छे को बारे मा छ >
< start="92.434" dur="1.5"> आगामी हप्ताहरूमा। >
< start="93.934" dur="3.4"> यो सबै संशोधनले भन्छ कि हामी केही मिनेटमा मतदान गर्दैछौं >
< start="97.334" dur="2.467"> के हामीले बेरोजगारी फाइदाहरू टिप्नु पर्छ? >
< start="99.801" dur="4.332"> काम गरेको बेला तपाईले भर्खरै पाउनु भएको मजदूरीको १००% मा। >
< start="104.133" dur="1.867"> यो बिल अन्तर्गत, अब लेखिएको छ रूपमा, >
< start="106" dur="1.767"> सरकारले धेरै अमेरिकीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछ >
< start="107.767" dur="1.7"> सरकारी सहायता मा हुन >
< start="109.467" dur="2.434"> उनीहरूले बनाउने भन्दा तिनीहरू आफ्नो नियमित काम मा काम गर्दै थिए। >
< start="111.901" dur="3.7"> म बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम विस्तार समर्थन गर्दछ। >
< start="115.601" dur="2.399"> यो पैसा प्राप्त गर्ने उत्तम र द्रुत तरीका हो >
< start="118" dur="2.133"> व्यक्तिलाई जसलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ। >
< start="120.133" dur="1.801"> तर हामीले प्रणाली निर्माण गर्नु हुँदैन >
< start="121.934" dur="2.066"> जहाँ बेरोजगारी बीमा लाभ >
< start="124" dur="2.334"> एक तलब भन्दा बढी हो। >
< start="126.334" dur="3.133"> हामी मानिसहरूलाई काम भन्दा काम दिनको लागि अधिक तिर्न सक्दैनौं। >
< start="129.467" dur="1.501"> यो आधारभूत सामान्य ज्ञान हो। >